Ngaba i-Iberdrola inokuya phezulu kwimarike yemasheya? | Ezezimali
Akukho nanye kwezona zibambiso zininzi zotyalo-mali kwimarike yengeniso eguquguqukayo yinkampani yombane yase-Iberdrola. Ukuya kwinqanaba lokuba kwiinyanga ezimbalwa bavukile kwizikhundla zabo ukuya kuthi ga kwi-9 ye-euro ngesabelo ngasinye. Inyaniso engenakucingwa kubatyali mali abancinci nabaphakathi kwiminyaka emibini okanye emithathu eyadlulayo. Kuba inyuke ngokuhambelana namaxabiso ayo ukusuka kwinqanaba elijikeleze i-4 euro. Ngamanye amagama, ukuphononongwa kwayo kuphantse kwaba li-100%, into engakhange yenzeke kulo nakuphi na ukhuseleko kwizabelo zaseSpain.
Ukuthatha ithuba lokufumana into engenasiphako engayekanga kude kube ngoku. Ngelixa kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba idityaniswe kwelinye lamacandelo emarike yemasheya eqhuba kakuhle kwiimarike. iinyanga ezilishumi elinambini ezidlulileyo. Ukusebenza njengendawo ekhuselekileyo ngamaxesha okungazinzi okukhulu kwiimarike zezabelo. Ngaphandle kwazo naziphi na izilungiso eziphambili ngeli xesha liluncedo kakhulu kwimicimbi yeshishini lakho.
Enye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo eIberdrola yile inento yokwenza nentlawulo yesahlulo sayo kubanini zabelo. Kuba ngoku, ngalo mzuzu ibonelela ngenzuzo eqikelelweyo malunga ne-6%, Ukuba yenye yezona ziphezulu kwisalathiso semilinganiselo yee-equity zaseSpain, i-Ibex 35. Ngokuvumelana ngokupheleleyo nezinye iinkampani ezikwicandelo lombane, ezizezona zihambisa owona mvuzo ubalaseleyo minyaka le kwaye kungabikho namnye ngaphandle kokuhlawuliswa. iakhawunti ebaleka kabini kumthambo. Njengenye yezinto eziqhelekileyo ekuziphatheni kwayo kwiimarike zezabelo zamazwe.
1 Iberdrola kukunyuka simahla
2 Ngaba u-Iberdrola unokulayisha ngaphezulu?
3 Ngxaki yokunyuka
4 Ngeemoto zombane
5 Imodeli entsha yamandla
6 Ukuxhasa ngezimali kwizinto ezihlaziyiweyo
Iberdrola kukunyuka simahla
Ixabiso lenkampani yombane okwangoku likwimeko yokunyuka kwamahhala: Oko kukuthi; Ayinakuxhathisa ngaphambili kwaye ke inokubaluleka okubalulekileyo kuhlaziyo lwayo phantse kwii-euro ezisi-XNUMX ngesabelo ngasinye: Ukusuka kule meko; Lelinye lamaxabiso ekufuneka lithathelwe ingqalelo ukusukela ngoku ngenxa yobuchwephesha obungenakoyiswa. Ngaphezulu kwamaxabiso afanelekileyo kwimarike yesizwe, njenge BBVA, Santander, Repsol okanye Inditex, ukukhankanya nje imizekelo embalwa.
Ngelixa kwelinye icala; Elinye lamaxabiso acetyiswayo ngabahlalutyi abohlukeneyo kwiimarike ze-equity. Ngale ndlela, bakholelwa ekubeni isengasondela kumanqanaba ajikeleze i-euro ezilishumi okanye ezilishumi elinanye: ngale ndlela. Nangona isenokuphumelela okuqhubayo kwenye ye awona macandelo afanelekileyoImidla yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ukuza kuthi ga ngoku isebenze njengendawo ekhuselekileyo yokujongana nexesha lokungazinzi okukhulu kwiimarike zokulingana kwezemali kunye nolunye ukhuseleko kweli candelo libalulekileyo ukwenza ulondolozo lube nenzuzo kula maxesha. Ke unokuyiphucula indlela oziva ngayo
Ngaba u-Iberdrola unokulayisha ngaphezulu?
Akukho nanye kwezona zibambiso zininzi zotyalo-mali kwimarike yengeniso eguquguqukayo yinkampani yombane yase-Iberdrola. Ukuya kwinqanaba lokuba kwiinyanga ezimbalwa sele inyukile kwizikhundla zayo ukuya kwi-9 euro ngesabelo ngasinye. Inyaniso engenakucingwa kubatyali mali abancinci nabaphakathi kwiminyaka emibini okanye emithathu eyadlulayo. Kuba inyuke ngokuhambelana namaxabiso ayo ukusuka kwinqanaba elijikeleze i-4 euro. Ngokufanelekileyo, Ukuhlaziywa kwayo phantse kube yi-100%, into engakhange yenzeke kulo nakuphi na ukhuseleko kwimali yaseSpain.
Ngelixa kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba idityaniswe kwelinye lamacandelo emarike yemasheya esebenze kakuhle kwezi nyanga zilishumi elinambini zidlulileyo. Ukusebenza njengendawo ekhuselekileyo ngamaxesha okungazinzi okukhulu kwiimarike zezabelo. Ngaphandle kwazo naziphi na izilungiso zokuqwalaselwa koku ixesha eliluncedo kwimicimbi yakho yeshishini. Enye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo eIberdrola yile inento yokwenza nentlawulo yesahlulo sayo kubanini zabelo. Njengobutyebi bayo obukhulu kwiimarike zezemali kwaye oko kukunceda uhlengahlengise ukungena kunye nokuphuma kwamaxabiso kukhuseleko.
Ngelixa kwelinye icala, u-Iberdrola uthathe isigqibo sokuyithengisa ipotifoliyo yonikezelo yegesi yexesha elide engamanzi kwiPavilion Energy. Isivumelwano siquka ukuhanjiswa kweekhontrakthi zexesha elide zokuhlengahlengisa amandla e-United Kingdom kunye nezothutho lwaselwandle, kunye nezinye izivumelwano ezincedisayo ezinxulumene nokuhanjiswa kwegesi. Kwelinye icala, ukusebenza kuyinxalenye yesicwangciso sokujikeleza kwempahla ye-Iberdrola esinexabiso le-3.500 yezigidi ze-euro ngexesha le-2018-2022, esele inkampani sele iyifumene ngokumalunga ne-50% ngeli xesha.
Ngaphandle komzuzu ibonakalisiwe kwixabiso lenkampani yombane nje ukuba ifike kumanqanaba ee-9 ze-euro ngesabelo ngasinye. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba indawo entle yabahlalutyi bezezimali ichaze ukuba sele inzima kakhulu ukuba inokubala ngokuhambelana namaxabiso ayo. Akumangalisi ukuba baqikelele ukuba sele ifikelele kwelona nqanaba liphezulu lesitayile sayo esonyusa amandla. Nangona isenokuqhubeka isothusa wonke umntu kwiinyanga eziseleyo kude kube sekupheleni kwalo nyaka ube luncedo kakhulu kwimidla yabo kwiimarike zezabelo. Ngamaxesha abo aphakamileyo angazange acinge kude kube kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo.
Ngayiphi na imeko, inye into icacile kwaye kukuba amandla ayo okuhlaziya ngokuthe ngcembe ancitshiswa ngenxa yokunyuka kwawo kwakutshanje kwimarike yemasheya. Kwaye le yinto esebenzayo ngokuchasene nomdla wabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Enye into esebenza endaweni yayo kukuphuhliswa kweemoto zombane kwaye ezinokukunceda ekubekeni kwiimarike zezabelo. Ukusuka kolu luvo lobuchule kweli candelo, u-Iberdrola uveze Isicwangciso se-Iberdrola Green sokuhamba, apho inika umthengi ukuthengwa kwesithuthi sombane kunye nokuxhaswa kwemali, ukufakelwa kwendawo yokutshaja kunye nokunikezelwa kwamandla, eya kuthi iphinde ivuseleleke nge-100%. Sisisombululo sokuqala esibanzi sokukhuthaza ukusetyenziswa kolu hlobo lweendlela zothutho eziphuhliswe yinkampani eSpain.
Kule meko, kunokukunceda unyuke iirung ezimbalwa ngaphezulu kule minyaka imbalwa izayo ekubumbeni amaxabiso akho. Njengexabiso elongeziweyo kunye nelongeziweyo ukuze liqhubeke nokukhula kwiimarike zesizwe. Ayothusi into yokuba iya kuba ngumnombo omtsha weshishini oya kudala kuphuhliso lwezi moto.
Imodeli entsha yamandla
Ukusukela ngoku ukuya phambili, kufuneka sigxininise ukuba i-Iberdrola isungule uphawu lwayo olutsha lomsebenzi wayo wokuhambisa umbane eSpain ukuze iqhubeke nokukhokela imodeli yamandla amatsha, acocekileyo, asebenza ngakumbi nangokuzinzileyo. Inkampani iya kubizwa igama 'i-DE, Smart Electric Networks', endaweni yegama Ukusasazwa kombane eIberdrola. Njengenye yezona zinto zintsha zivelweyo yinkampani ukusombulula ishishini layo kule minyaka imbalwa izayo. Apho ukhuphiswano necandelo liza kuba lelinye lamadabi ekuza kufuneka alilwe kule ndawo ngokubanzi.
Le mveliso intsha ibonakaliswa ngokuba nokungaphezulu kwe- 11 yezigidi zonxibelelwano, ijolise kwizembe ezintathu: ukuphuculwa kwenkonzo (umgangatho wonikezelo kunye nophuculo lokhathalelo), ukhathalelo lwendalo (ukukhuselwa kwezilwanyana nezityalo nezilwanyana ezohlukeneyo) kunye notshintsho lwamandla, luthanda ukudityaniswa kwezinto ezinokuhlaziywa ngakumbi, kunye Ukuhamba okuzinzileyo, izixeko ezikrelekrele kunye nokusetyenziswa komhlaba, ngokusebenzisa iigridi ezintle.
Ukuxhasa ngezimali kwizinto ezihlaziyiweyo
U-Iberdrola uphumelele kwimali mboleko eluhlaza eye yanikezelwa liZiko leMboleko eliSemthethweni (i-ICO), isixa semali esixabisa 400 million kunye nexesha layo lokuhlawula amatyala ukuya kwiminyaka eli-12 kunye nobabalo lwenqununu. Umsebenzi utyikityiwe ngale ntsasa ngumongameli wenkampani, u-Ignacio Galán, kunye nomongameli we-ICO, uJosé Carlos García de Quevedo, kwintlanganiso ebibanjelwe kwii-ofisi ze-Iberdrola eMadrid, apho ukhuphiswano necandelo liza kuba lelinye lamaqela. iimfazwe oza kulwa nazo kule ndawo ngokubanzi.
Imali mboleko ifumana ubume bayo obuluhlaza kuba imali efunyenweyo iya kwabelwa indawo yokugcina amanzi e-Támega, eyakhiwa yinkampani ngoku kumantla ePortugal. Yiprojekthi equka ukwakhiwa kwezityalo ezitsha ezintathu ezinamandla apheleleyo ayi-1.158 megawatts (MW), nto leyo eza kuthetha Yandisa amandla ombane nge-6% Iyonke iPortugal kwaye iya kuvumela ukubonelela ngamandla ahlaziyekayo kumakhaya angama-440.000. Kweso sikhundla, i-880 MW iya kuba yeyokumpompa, eyona nkqubo isebenzayo yokugcina amandla namhlanje, eququzelela ukudityaniswa kwezinto ezihlaziyiweyo kwinkqubo yombane weepeninsular kunye nokuzinza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ngaba i-Iberdrola inokuya phezulu kwimarike yemasheya?